सुदर्शन अर्याल/नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले इतिहासकै अप्ठ्यारो मोडमा छ। कमरेड केपी शर्मा ओली, तपाईंले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अवसानको बाटोमा डोर्‍याउनु भएको छ। कम्युनिस्ट शक्ति एकीकृत गरेर उचाइ हासिल गरिरहेको बेला फेरि छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुर्‍याउनु भएको छ। आन्दोलनका शक्ति एकीकृत गर्न लागेको जित समय क्षयीकरण हुनमा लागेन।
यतिखेर, पूर्वत अवस्थामा फर्किएको एमाले पनि क्षयीकरणको डिलमा छ। एउटा बलियो कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष सन्त्रासमा छ। तपाईंको उदय नै कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिको संकटको प्रस्थान विन्दु बन्न पुगेको भन्दा फरक नपर्ला। आज सारा नेपाली कम्युनिष्टले तपाईंको उदयको परिणाम भोग्न बाध्य छन्।
पार्टीमा तपाईंको उदय उदयपछि सामूहिक निर्णयको अभ्यास समाप्त भयो। एकलौटी रूपमा पार्टी हाँक्ने तपाईँको दम्भले उत्पन्न संकट गर्‍यो। एमाले-माओवादी एकताको निर्णय पनि तपाईं एक्लैले निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यो श्रंखला एकता पछि पनि जारी राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो। पार्टीका कुनै पनि निर्णय नमान्ने, आफ्नो सहमतिमा भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने, पार्टीमा मनपरितन्त्र चलाउने काम गरिरहनु भयो। त्यसले पार्टीमा फुटको स्थिति सिर्जना गरायो। तपाईंका कारण उत्पन्न आन्तरिक द्वन्द्वले इतिहासकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी संकटमा पर्‍यो।
सबैको साथ गुमाएर अल्पमतमा परेपछि तपाईंले गत पुस ५ गते असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। जुन कदमको फायर तपाईंतिरै सोझियो। त्यसपछि आफ्नै अग्रसरतामा एक भएको पार्टी नेकपाको अवसान गराउनु भयो। नेकपाको अवसान गराएर नपुगेपछि अहिले नेकपा एमाले फुटाउने अन्तिम प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसको प्रतिवाद, एमालेको स्वर्णिम युगका निर्माता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु लगायतका नेताहरूले गरिरहनु भएको छ।
तपाईं र अदालतको सेटिङमा नेकपा खारेज भएसँगै नेकपा एमाले ब्युँतियो। नेकपा हुँदा प्रचण्डसँग एउटै कित्तामा रहेका माधव नेपाल समूह आफ्नै पार्टीमा रहेर संघर्ष गर्ने निचोडमा पुग्नु गलत थिएन। तर, कुनै पनि हालतमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेतालाई लखेटेर एमाले सिध्याउँने एक मात्र लक्ष्य र उद्देश्यका साथ तपाईं लागिपर्दा एमाले इतिहासकै अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ।
सर्वोच्चले नेकपा एमाले ब्युँताएपछि अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंले नवौं महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुपर्ने थियो। तर, विधान विपरीत माओवादी नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो। आफ्नो गुटको भेला बोलाएर विधान संशोधन गर्नुभयो। फागुन २८ गते सम्पन्न गुट भेलामार्फत आलोचक सबैको पद खोस्नुभयो। यो तपाईं कदम नेकपा एमालेको विधान विपरीत थियो। विधानतः विधान संशोधन, विधान अधिवेशन वा महाधिवेशनमार्फत मात्र सम्भव छ। त्यसैले फागुन २३ गते यता तपाईंले गरेका सम्पूर्ण गतिविधि माधव-झलनाथ समूहले अवैधानिक भनेको हो।
पार्टी अध्यक्षले विधान विपरीत गतिविधि गर्दै पार्टी फुटाउने खेल सुरु गरेपछि माधव-झलनाथ समूहले एमाले रक्षाका लागि भन्दै प्रतिरोध गतिविधि सुरु गरेको हो। चैत ४ र ५ गते देशभरबाट नेता कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय भेला गर्‍यो। जुन भेलाले असली एमाले भेलाको झल्को दियो। त्यसबाट तपाईं अतालिनु भयो। र थप हिंस्रक रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्नु भयो। सबै शक्ति कब्जा गरेर ‘बहुबली’ बन्ने दाउमा तपाईं लाग्नु भयो। तर, हामी सारा कम्युनिष्टहरुले तपाईंबाट यो अपेक्षा गरेका थिएनौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउने निर्णय लिएको बेला हामीले आफूलाई कम्युनिस्ट हुनुमा गर्व गरेका थियौँ। तर अहिले !
कमरेड ओली, तपाईंलाई म कुन आधारले गर्वको साथ कमरेड भनूँ ? मलाई त लाग्छ कमरेड तपाईं नक्कली कम्युनिस्टको खोल ओढेर नेपाली कम्युनिष्टको जग नै उखेलेर फाल्ने कू-मार्गको यात्रामा हुनुहुन्छ। एउटा सच्चा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा हुनुपर्ने राम्रो गुण के छ तपाईंमा ? तपाईंमा एउटा खराब प्रवृत्ति हाबी भएको छ, तपाईंलाई कमरेड भनेर सम्मान गर्न मन लाग्छ। तर, तपाईंले त्यो आधार तय गरेको खोइ ?